အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် Archives > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / Tag Archives: အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက်
Tag Archives: အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက်
June 2, 2016 အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် 0
မွန်ပြည်နယ်အစိုးရ ရက် ၁၀ဝ စီမံချက်? ရက်ပေါင်း ၁၀ဝ စီမံချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ မေ ၃၁ ရက်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အချက်တွေထဲက (၁၁) မှာ အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်နှင့် နိုင်ငံသားဦးစီးဋ္ဌာနက “ရွှေ့ပြောင်းများကို အိမ်ထောင်စု စာရင်းထုတ်ပေးမည်၊ ကျောင်းဖွင့် ရာသီတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ၁၀ နှစ်ပြည့် မှတ်ပုံတင်များ ကျောင်းများတွင် ကွင်းဆင်း လုပ်ဆောင်ပေးမည်၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်များကို စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ပေးမည်” လို့ ပါရှိခဲ့ပါတယ်။ ရက် ၁၀ဝ စီမံချက်ကာလဟာ ၂၀၁၆ ဧပြီ ၁ ရက်မှ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲများက အင်အားကြီးတပ်ပေါင်းစုတစ်ခု ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာနိုင်သလား
May 25, 2016 အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် 0
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း ၇၀ နီးပါး ဖြစ်ပွားလာသည့် ပြည်တွင်းစစ်အဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်အချို့နှင့် အစိုးရတို့ စားပွဲဝိုင်းထိုင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေ ရှာခဲ့ကြ၊ ရှာနေကြဆဲဖြစ်ပါသည်။
အထက်အောက် အသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင် ဒီမိုကရေစီပြည်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
March 21, 2016 အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် 0
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ (၂၀၀၈) ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုနိုင်ရန် ဆယ်စုတစုနီးပါး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးငြင်ခုံမှု ပြုခဲ့ကြရသည်။ ထိုစဉ်ကတည်းကပင် မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် မိမိအခြေအနေနှင့် နီးစပ်သော အထက်က လမ်းတည့်ပေးလိုက်သော လေ့လာစရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က အလေးထား အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်မှာ အရပ်ဘက်နှင့် စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များတို့၏ အပေးအယူပြုလုပ်နိုင်မှု၊ ကျွမ်းကျင်လိမ်မာမှုသာ ဖြစ်သည်။
ဖမ်းသိမ်းလိုင်စင်မဲ့ကားလေလံပွဲဖျက်ပြီး ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုခွဲတမ်းချဝေငှပေးတာ နည်းလမ်းကျရဲ့လား
March 19, 2016 အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် 0
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ဖမ်းသိမ်းခဲ့တဲ့လိုင်စင်မဲ့ Without ကားတွေကို လေလံမတင်တော့ဘဲ ဌာနဆိုင်ရာတွေကို မဲနှိုက်ခွဲတမ်းချဝေငှပေးတယ်ဆိုတာ အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုပုံစံက တကယ်နည်းလမ်းကျရဲ့လားလို့ တွေးတောစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။
MCL ဘိလပ်မြေစက်ရုံကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပြီ
January 26, 2016 အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် 0
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ် “ပျားတောင်” ဒေသကို ဝင်ရောက်လာတဲ့ဘိလပ်မြေကုမ္မဏီတွေဟာ မဝင်ခင် အပြောတမျိုး ဝင်ရောက်ပြီးအလုပ်တမျိုးဖြစ်လာတော့ အနီးတဝိုက်ကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ ကော့ဒွန်း၊ ကော့ပနော ပေါက်တော၊ကွမ်ငန်းကျေးရွာသားတွေနဲ့ သံဃာတော်တွေစုရုံးပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် လူမှုရေးပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့တွက်ရည်ရွယ်ကာ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက်နေ့က စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါပြီ။
October 2, 2015 အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် 0
ဗညားလတိုပ် – စက်တင်ဘာလ ၂၈ မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ချင်းမိုင်မြို့တွင် ကျင်းပသော တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၉ ဖွဲ့ ၏ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးတွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၇ ဖွဲ့ဖြစ်သည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)၊ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် (DKBA)၊
သေနတ်သံမတိတ်သေးတဲ့ အပစ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်
September 20, 2015 အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် 0
ချစ်မင်းထွန်း – တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးမယ့်ရက် သတ်မှတ်ဖို့ အချိန်နှီးကပ်လာလေလေ တိုင်းရင်းသားဒေသ အထူးသဖြင့် ရှမ်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ် မြေပြင်အောက် ခြေအဆင့်များမှာတော့
June 22, 2015 အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် 0
မင်းထက်အောင်-အောက်တိုဘာမှာလား! နိုဝင်ဘာမှာလား! ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့ရက် မကြေငြာသေးလို့ နေ့အတိအကျမသိရသေးပေမယ့် ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူတွေ
April 24, 2015 အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် 0
၁၂၈၀ မီဂ္ဂါဝပ်ရှိ ဂျပန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံကို မွန်ပြည်နယ်တွင် ဆောက်လုပ်ရန် တိုယိုထိုင်းကုမ္ပဏီနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဌာနတို့ နားလည်မှုစာချုပ်ကို ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့၌ ရေးထိုးကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဝါဒစွဲကြောင့် သင်းကွဲ၊ သင်းကွဲမှုကြောင့် လူမျိုးမွဲ
June 27, 2014 အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် 0
နိုင်မောင်တိုး – ကျွန်တော်နှင့် ဆရာ နိုင်ငွေသိန်း ( အာစာဇနူ ) တို့သည် မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ်၊ တောင်ပရွာတွင် ၁၃၇၅ ခု တပို့တွဲလဆန်း (၁၀)ရက် (၉.၂.၂၀၁၄) ရက်နေ့ညပိုင်း စာပေဟောပြောပွဲအတွက် ဘိတ်ကြားခြင်း ခံရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးအား မော်လမြိုင်မှ ကြိုလာပြီး ကလော့သော့ တောင်ပရွာဝင် ကတ္တရာလမ်းမကြီးမှ